Hiran State - News: HS:- Wafti ka socda QM oo gaaray Hiiraan.
HS:- Wafti ka socda QM oo gaaray Hiiraan.
HS:- Wafdi balaaran oo ka socda Qaramada Midoobay ayaa maanta mar kale soo gaaray caasimada Hiiraan ee Belet Weyn iyadoo ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha Ugaas Khalif qeybaha kala duwan ee bulshada Hiiraan sida sarakiisha ciidamada Hiiraan iyo waliba waxgarad.
Wafdiga ka socda QM oo intii aysan soo gaarin magaalada Belet Weyne xiriir la sameeyey masuuliyiintii dowlada ka joogtay Hiiraan oo ay safarkii hore kula kulmeen halkaasi ayaa ujeedadoodu aheyd sidii ay ugu jawaabi lahayen codsi iyo warbxiin ay horey u qaateen markii ay soo gaareen magaalada Belet weyne. nabadgalyada magaalada oo ah mid leysku laheyn karo ayaa siweyn loo sugay maanta iyadoona jidkasta lagu arkayey ciidamada Hiiraan oo ay hor kacayaan saraakiil dhawaantan ka timid Mogdisho oo reer Hiiraan ah.
Hay’addaha maanta soo gaaray magaalada Belet Weyne ayaa waxaa ka mid ahaa WFP, UNICEF, UNHCR, iyo waliba UNOCHA, kuwaasoo u kuur-galayay sida ugu fudud ee gargaar loo soo gaarsiin karo bulshada Hiiraan iyagoona u guur galay wadada ay ka soo degto diyaarada iyo goobaha ku haboon ee ay xarumo cusub ka dhigan karaan.
Sidoo kale waftiga ayaa shir albaabada ay u xirnaayeen la qaatay odayaasha dhaqan-ka iyo waxgaradka magaalada Belet Weyne ee dhawaantan soo dhaweeyey in Hiiraan loo sameeyo maamul cusub una muuqda kuwa aad ugu xiran siyaasiyiinta reer Hiiraan ugu jira dowlada kumeel gaarka ayaa waftiga warbixin ka siiyay xaaladaha dhinaca nolasha ee ka taagan guud ahaan Hiiraan, iyo baahida balaaran ee xiligan loo qabo in la helo gargaar rasmi ah oo lala gaaro dadka dhibaateysan iyadoo laga dheehan karay waxgaradka iyo aqoonyahanada waftiga la kulmay kuwo ay ka muuqatay diyaar garoow weyn.
Kadib markii uu kulanka soo dhamaday ayaa waxaa hadane wada kulmay hayaddaha maxaliga ah ee ka howl gala gudaha Hiiraan iyo waftigii QM ka socday waxaana leysla meel dhigay dhaman in dhinacyada kala duwan ee bulshada Hiiraan ay meel kaka soo wada jeestaan cidkasta oo isku dayda iney musuq maasuqdo howlaha gar gaarka ee loo wado sahcbaka aadka ugu baahan.
Sikastaba waa markii labaad ee ay wafti noocaan ah soo gaaraan gudaha magaalada Belet Weyne iyagoona horey u soo gaaray magalada. waftiga maanta soo gaaray magaalada ayaa xaqiijiyey iney iyagu arkaan isbedel dhinaca nabadgalyada ah marka la eego safarkii kan ka horeyey oo ay ciidamo intaan ka badan ku sugnaayeen gudaha magaalada halka ay hada joogaan intooda badan ciidanku daafaha magaalada.
· admin on February 04 2012 12:34:58 · 0 Comments · 1686 Reads ·
14,613,584 unique visits